ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံတကာမှ ခရီးသွား ဧည့်သည်များ လုံခြုံစိတ်ချ စွာဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ မှ ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောတောင်ရေမြေ သဘာဝအလှအပများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များကို ကြည့်ရှုလေ့လာခံစားနိုင်ရန် လေကြောင်း၊ ရေကြောင်း များဖြင့် သာမက နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း အပျော်စီးသင်္ဘောများဖြင့်လည်းကောင်း လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု Wide View Travels & Tours Co.,Ltd စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားဧည့်သည် (၇၁) ဦးတို့သည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ် (၂၁) စီးဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှ ဇန်န၀ါရီလ (၂၁) ရက်နေ့အထိ ထီးခီး- ထားဝယ်- ထီးခီးမြို့ ခရီးစဉ်အတိုင်း သွားရောက်လည်ပတ်၍ ထီးခီးနယ်စပ်ဂိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားကြပါသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦနေလင်းအောင် အား ဝန်ကြီးဌာနဧည့်ခန်းမ ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကို ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဗရတ်ဆင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Khiri Travels မှ MD ဖြစ်သူ Mr. Edwin နှင့် Vivo Myanmar မှ MD ဦးရဲထွန်းဦး တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အစီအမံများရေးဆွဲချမှတ် ရေး ဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
Visited Myanmar by World Visitorswith their own automobiles crossing the border
January22, Nay Pyi Taw
Beautiful mountain ranges, beaches, streams and rivers, lakes, customs and ethnic costumes are persuading foreign visitors and our good hospitalities and Myanmar culture and antique historical heritage are also famous and valuable to learn.Then, most of the visitors visit Myanmar by their own automobiles crossing the borders and by cruises.
From January 8th to 18th, the 14Thai visitorstraveled to Myawaddy-TaungNgu-Mandalay-Moenyin-Sagaing-Taunggyi-Kyaing Tong-Tachileikwith their own (5) automobiles by the supervision of Ministry of Hotels and Tourism and the arrangement of Mother AyeyawaddyCo., Ltd. Then, they departed from the Tachileik gateway and proceeded to Thai.
Now, tourists are visiting the main destinations of Myanmar while the visa exemptions are processing with the goal of getting more visitor arrivals in Myanmar.
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု Osuga Myanmar Co.,Ltd စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဧည့်သည် (၃)ဦး၊ စပိန်နိုင်ငံသားဧည့်သည် (၂) ဦး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ဧည့်သည် (၂) ဦး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဧည့်သည် (၃) ဦး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားဧည့်သည် (၂) ဦးနှင့် ဒက်ခ်ျနိုင်ငံသား ဧည့်သည် (၁) ဦး ၊ စုစုပေါင်းဧည့်သည် (၁၃) ဦးတို့သည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် မော်တော် ယာဉ် (၃) စီး ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၆) စီးဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှ ဇန်န၀ါရီလ (၁၉) ရက်နေ့အထိ တမူး- ကလေး- ပုဂံ- ကလော – နမ့်စန်- ကျိုင်းတုံ- တာချီလိတ်မြို့ ခရီးစဉ် အတိုင်းသွားရောက်လည်ပတ်၍ တာချီလိတ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပါသည်။
Union Minister, U Ohnn Maung attends the ASEAN Tourism Forum 2019 (ATF) and related ASEAN meetings
21st January, Nay Pyi Taw
The ASEAN Tourism Forum 2019 (ATF) and related meetingswasheldat the FLC Convention Center of the FLC Bay Resort in Halong Town, Vietnam, from 14th to 18th January 2019. The Union Minister of Hotels and Tourism U Ohnn Maung lead the Myanmar delegation.
The Minister attended the opening ceremony of ATF 2019 on 16th January, the 22nd ASEAN Tourism Ministers Meeting on 17th January and then on the 18th ASEAN Plus Three Tourism Ministers Meeting and 7th ASEAN-India Tourism Ministers Meeting.
At these meetings, the Minister discussedthe current situation of tourism developmentasit related to ASEAN and partner countries, investment information, and Visa relaxation for China, Japan, South Korea and India. The Minister also took the opportunity to promote our new brand/logo – Myanmar-Be Enchanted and Myanmar’s involvement in regional tourism promotionalevents.
Further discussion took place on the latest updateof the Work Plan as assigned by ASEAN National Tourism Organization and ASEAN Tourism Committee, on the implement of tourism processes as agreed by ASEAN and the establishment of lawsin 2019 for future projects.
The Union Minister also attended the Press Conferences of the Ministers, the ASEAN Tourism Awards and the Closing Ceremony on 18th January 2018.
The Minister was very pleased to be present to witnessanumber of Myanmar business and services being recognized at the Tourism Awards. Among the winners were the Kyaikthale CBT,in Yangon,which received the ASEAN Community Based Tourism Award and two cities which received awards in the very important area of public toilets, the ASEAN Public Toilet Award, for high standards of Public Toilets. The winners are wherefacilities in Mandalay and Nay Pyi Taw. Both these awards recognises the high standard of service and the diversity of product Myanmar is striving to deliver for the visitor. Congratulation to all those Myanmar organisations who entered the awards.
Also, during the Forum, the Minister visited the Myanmar Tourism Booth at Travex in the Quand Ninh Exhibition of Planning and Expo Centre, in Halong. At Travex, the Minister’s discussions ranged from sustainable tourism development, service quality and human resource development, and heard from Myanmar delegates the results of their meetings with counterparts from ASEAN-China Center, ASEAN-Korea Center, United Nations World Tourism Organization, Pacific-Asia Tourism Association and Mekong Tourism Cooperation Office.
On the morning of 19th January 2019, the Union Minister and the delegation visited tourist attractions on Halong Bay and gained an understanding of the experiences available there for visitors atthis beautiful destination.